सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम खुल्यो – Sandesh Press
सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम खुल्यो
December 21, 2020 209
कोभिड १९ कारण लामो समय स्थगित भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र खुल्नेे भएको छ ।
भाैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका यतायात ब्यवस्था कार्यालय दाङ, बाके, रुपन्देहि मा अनलाइन फारम पुस १५ गते बाट दर्ता गर्न सकिने भएको हो ।
काठमाडौं – यातायात कार्यालयको लापरबाह र कर्मचारीको रुखो ब्यवहारले धेरै सेवाग्राही आजित बनेको समाचारहरु बारम्बार सम्प्रेषित गरेका छौ । तर यातायातको बेथिती यतिमात्रमा सिमित छैन । बर्षाैअघि शुल्क लिएर पनि स्मार्ट लाइन्सेन्स नदिने यातायातले झन् अहिले ट्रायल समेत खुलाएको छैन ।
बुधबार धादिङका हरिशरण अर्याल २०७६ माघमा दिएको ट्रायल पास भएपछिको लाइसेन्स लिन काठमाडौंको एकान्तकुनास्थित यातायात ब्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्रमा पुगेका थिए । अर्याल गतबर्षको माघयता पटकपटक लाइसेन्सका लिन यातायात कार्यालय धाउदै छन् । तर लाइसेन्स उनको लाइसेन्स परेको छैन ।
अर्याल मात्र होइन, भक्तपुर ठिमीका राजन प्रजापतीले पनि आफ्नो लाइसेन्सको नविकरण गर्न सास्ती भोग्नु परेको छ । प्रजापती, आफ्नो कामकालागी यो त्यो गर्दै याताया कार्यालयका कर्मचारीले आफुलाई धेरै शाखा डुलाइएको गुनासो गर्छन् ।
लाइसेन्सकै समस्या भोग्ने अर्का सेवाग्राही हुन् विजय मानन्धर । दुई वर्ष पहिले नै आवश्यक राजस्व तिर्दा समेत लाइसेन्स नविकरण नभएको र अझैसम्म लाइसेन्स हात नपरेको उनको गुनासो छ ।
यातायातबाट पाउने सेवामा सेवाग्राहीको गुनासो यतिमात्रमा सीमित छैन, अर्का सेवाग्राही राघव अग्रवालसमेत १ बर्षअघि नवीकरण गर्न दिएको लाइसेन्स अझै हात नपरेको गुनासो गर्छन् ।
लाइसेन्स सेवामा यी गुनासोहरु त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । बुधबार काठमाडौंको एकान्तकुनास्थित यातायात ब्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्रमा पुग्दा नवीकरण र बर्षाैअघि शुल्क बुझाएर स्मार्ट कार्ड नपाएको गुनासो गर्नेको भिड थियो ।
यसबारे हामीले कार्यालय प्रमुख सम्बरबहादुर कार्कीलाई सोध्यौ, शुल्क तिरेर पनि सेवाग्राही लाइसेन्स लिन घरीघरी किन धाउनु परेको हो ? स्मार्ट कार्ड दिन किन समस्या ? यस प्रशनको जवाफमा कार्की भने पुराना केहि लाइसेन्समा प्राविधिक गडबढीका कारणले प्रिन्ट नहुदा समेत सिस्टमले प्रिन्ट भएको देखाउने तर कार्यालयमा लाइसेन्स नआउदा समस्या भएको बताउँछन् ।
कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको सवारी साधनको लाइसेन्सको ट्रायल खुल्न नसकेको लामो समय भयो । सवारी कर, नवीकरण लगायत अन्य सरकारी सेवा सुरू भए पनि ट्रायल भने सुरू हुन सकेको छैन । आखिर कहिले खुल्छ त नयाँ लाइसेन्सको ट्रायल ? जवाफमा कार्की भने मन्त्रालयले ट्रायल खोल्ने सुचना नदिदासम्म तत्काल ट्रायल नखुल्ने बताउँछन् ।
तत्काल ट्रायल नखुल्ने मात्र होइन नयाँ लाइसेन्सकालागि लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने हल्लामा समेत सत्यता नरहेको कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार हरेक नयाँ परीक्षार्थीले पहिले झै अनिवार्य ट्रायलको लिखित परीक्षा दिनुपर्छ ।
Prevकोरोना भाइरस विरुद्वको पहिलो खोप लगाएकी नर्स खोप लिएको केही मिनेट पछि नै बेहोस भै भुइँमा ढलिन पुरा हेर्नुहोस्
चन्द्रागिरि हिल्सको आईपीओ २४ गतेबाट खुल्दै